प्रधानमन्त्री ज्युलाई खुल्ला पत्र । « Daily News Bank
प्रधानमन्त्री ज्युलाई खुल्ला पत्र ।
डिएर प्रधानमन्त्री ज्यु ,
हल्दी दूध’ भारतमा लगभग हरेक बिमारको ओखतीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, म पनि कहिलेकाहिं पिउँछु । बिहे अघि ‘हल्दीका रसम’ भनी छालामा बेसारको लेप दलिन्छ, जसले छालामा निखार ल्याउँछ भनिन्छ । नेपाल तिर पनि ज्यान बेस्सरी थाक्यो भने ‘हलेदो खाने भैयो’ भनिन्छ । यसको अर्थ बेसारले ज्यान बाँध्छ भन्ने विस्वास पनि हो । खिचडीमा ‘काँचो बेसार’ को प्रयोग गरिन्छ जुन माघमा खाइन्छ । चिसो बाट जोगाउँछ भन्ने विस्वासले हो । घाँटी खराब हुँदा, चिसोले छोप्दा म आफू पनि नून-बेसार-अदुवा-ज्वानो पकाएर खान्छु ।
यसर्थमा भन्नु पर्दा प्रधानमन्त्री ‘बेसार-वाणी’ मा खासै गलत हुनुहुन्न ।
हो, प्रधानमन्त्री केही कुरामा चाहिं गलत हुनुहुन्छ । ‘सबै कुरा मैले मात्र जानेको छु’ भन्ने मान्यतामा गलत हुनुन्छ । ‘सबै कुरा नेपालमा मात्र हुन्छ’ भन्ने मान्यतामा गलत हुनुहुन्छ । ‘मैले भने पछि सबै कुरा प्रामाणिक’ हुन्छन भन्ने भ्रममा गलत हुनुहुन्छ । जस्तो: उहाँले ‘जन्डिस र रक्त अल्पता भएकाले बेसार खान हुन्न’ भनिदिनु भयो,जुन डाक्टरहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
उहाँमा अर्को पनि भ्रम छ- बेसार,अदुवा,लसुन,मरीच लगायतका मरमसला नेपालमा मात्र खाइन्छन भन्ने । यी सामग्री संसार भर पाइन्छन,खाइन्छन । रूप र स्वाद अनि खाने तरिका फरक होला ।
उहाँले ‘इम्यूनिटी पावर नेपालीको धेरै छ’ भनेर बारम्बार दावी गर्नुहुन्छ । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने हरेक खेलकुदमा नेपाल विश्वमा एक नम्बर हुनु पर्ने । औसत आयुमा नेपालीहरू विश्वमा एक नम्बर हुनु पर्ने । जनस्वास्थ्यको आँकडामा नेपालीहरू विश्वमा एक नम्बर हुनु पर्ने । तर त्यस्तो त छैन । हो, एउटा सत्य चाहिं के हो भने नेपालीहरूमा जोश चाहिं बढी छ, आक्रोश पनि बढी छ । अलिकती पियो कि लड्न तम्सिहाल्ने रगत चाहिं तातो छ ।
तर डियर प्रधानमन्त्री ज्यु,
यी सब गुण ‘इम्यूनिटी पावर’ बलियो भएर भएका हैनन, बरु ‘इम्यूनिटी पावर लस’ हुँदै गएर भएका हुन ।
– २०/२२ वर्षको केटो घर देखि २० मिनेटको सदरमुकाम सम्म पैदल जान सक्दैन,मोटरसाइकल चाहिन्छ,साइकल चढे इज्जत घट्छ । इम्यूनिटी पावर बढी भएर होला कि कम भएर ??
– तीस वर्ष नपुग्दै चेलीहरूको वजन १०० के जी नाघ्न थाल्छ । प्रेसर,सुगर,थाइरोइड देखिन थाल्छन, इम्यूनिटी पावर बढी भएर होला कि कम भएर ??
– तीस देखि चालीसका हामीहरू विदेशमा ‘अंकल’ देखिन्छौं । यहाँका चालीस देखि पचासका अंकलहरू ठिटा देखिन्छन । पुटुस्स उठेको हाम्रो भुँडीको यिनीहरू मजाक उडाउँछन । ७० वर्षे जापनिज संग संगै उभिएर काम गर्दा हामी लल्याक लुलुक हुन्छौं । इम्यूनिटी पावर बढी भएर होला कि कम भएर ?!
– उत्ति मात्रामा दारू पिए पनि यिनीहरू जस्ताका तस्तै हुन्छन । हामीलाई चढिसक्छ,चढे पछि के के हुन्छ,ती कुरा नभनौं क्यार । इम्यूनिटी पावर बढी भएर होला कि कम भएर ?!
डियर प्रधानमन्त्री ज्यु,
कोरोना के हो भन्ने कुरामा वैज्ञानिक,चिकित्सक र विषय विज्ञ नै अलमलमा परिरहेको अवस्थामा तपाईं बाट आउने बेलाबखतका हल्काफुल्का टिप्पणीले आम जनतामा थप अन्योल सृजना गर्ने गर्छन । नून,बेसार,अदुवा,लसुन लगायतका मरमसला तपाईंले नभने पनि नेपालीले दैनिक खानामा प्रयोग गरिरहेका छन,गरिरहने छन । तपाईंले भन्नु पर्ने कुरा यी भन्दा अलग हुनु पर्छ,फरक हुनु पर्छ । सके सम्म तथ्य र डाटाको आधारमा लिखत हेरेर बोल्ने बानी बसाले राम्रो हुने थियो । तपाईंका सल्लाहकारहरूको ‘इम्यूनिटी’ बलियो देखिएन यी कुराहरूमा ।
इम्यूनिटी बलियो हुनु भनेको हाड,मासु र छाला मात्र बलियो हुनु मात्र हैन नि, सोंच र योजना पनि बलियो हुनु हो । दृष्टिकोण र वक्तव्य पनि बलियो हुनु हो । काम र नतीजा बलियो हुनु हो । यती लामो ‘बेसार माहात्म्य’ को शृंखला चलिरहँदा र नेपालीको इम्यूनिटीको दावी पेश गरिइरहँदा ‘नेशनल इम्यूनिटी’ त कमजोर देखियो नि ! सायद देशको मुटू कमजोर भयो कि ? देशको मुटू त प्रधानमन्त्री पद हो नि, हैन र ? यो मुटूलाई उत्ताउलो हुन सुहाउँछ र ? आगे तपाईंको मर्जी !!
– उही तपाईंकाे बेसारे नागरिक
केशब राज भुसाल ,तुल्सिपुर ७ दाङ
लेखकः मिसन न्युँज नेपालका सञ्चालक हुन ।